Marais masay Notrongisin’ílay fiara kely ny andrin-jiro
Nitolefika nodomin`ny fiara kely iray ny andrinjiron`ny JIRAMA mitondra herinaratra mahery vaika eny amin`ny “Rocade Marais Masay” ny alahady maraina tamin`ny roa ora tany ho any.
Niteraka fikorontanan`ny herinaratra tamina faritra vitsivitsy teto an-drenivohitra moa ity loza ity. Toerana matetika ahitana lozam-pifamoivoizana iny faritra “Marais Masay” iny noho ny lalana migodana sy malalaka ka maro ireo mpamily no mandeha mafy. Misy anefa ireny “casseurs de vitesse” ireny ka raha tsy voafehy ny familiana dia toa izao mitondra loza ho an`ny tsy manan-tsiny. Etsy an-kilany ihany koa, sao tokony hojeren`ny JIRAMA akaiky ihany koa ny refin`ireo andrin-jiro, indrindra ny “armature” sy ny “ancrage” izay tena miaro azy ireny satria fiarakely iray toa naongana ilay andrin-jiro lehibe mitondra herinaratra.